ဘောလုံးဟောကိန်းများ Minsk U19 vs BFC Daugavpils U19 20 October 2021
UEFA လူငယ်လိဂ် ၂၀၂၁/၂၂
ခန့်မှန်းချက်ဖော်မြူလာ၊ Poisson ၏ဥပဒေ- P(x;μ) = (e - μ) (μx) / x!
ရလဒ်ကို မည်သို့နားလည်ရမည်နည်း။ 100% နှင့် အနီးစပ်ဆုံးရောက်လာသောအသင်းသည် အနိုင်ရရန်အခွင့်အရေးအများဆုံးဖြစ်သည်။
အသင်းနှစ်သင်းကြားတွင် ဂိုးအများဆုံးသွင်းယူမည့်သူ။ 50% ကျော် = မင်းလောင်းကြေးကို အနိုင်ယူနိုင်တဲ့ အလားအလာရှိတဲ့ အသင်း။
ဒီမှာ ပွဲ၏အခမဲ့ဟောကိန်းများ Minsk U19 vs BFC Daugavpils U19 ဒီ၏ Oct 20, 2021 ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက် UEFA လူငယ်လိဂ် ၂၀၂၁/၂၂
လောင်းကစားခြင်းအတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်များကားအဘယ်နည်း Minsk U19 vs BFC Daugavpils U19?
UEFA လူငယ်လိဂ် ၂၀၂၁/၂၂ ဒီနေ့ခန့်မှန်းချက်ကဘာလဲ?
များအတွက်ဘောလုံးဟောကိန်းများကဘာလဲ Oct 20, 2021?
၏နှိုင်းယှဉ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲခန့်မှန်းချက် Oct 20, 2021
ခန့်မှန်းခြင်းနည်းလမ်း - bet-in-asia.com ဆိုဒ်သည်ကိန်းဂဏန်းများအနက်နှင့်ရာခိုင်နှုန်း၏အနက်ကိုအခြေခံသည် သင်္ချာပုံသေနည်း ၎င်း၏ပေးရရှုပ်ထွေးဒေတာ၏ ရလဒ်များကိုအခမဲ့ဟောကိန်းများ အပေါ် Minsk U19 vs BFC Daugavpils U19 အစည်းအဝေး။ လုပ်ခွင့်ပြုသည့် technique ကို တိကျသောခန့်မှန်းချက်များ ထိုနေ့၏ပွဲစဉ်ပေါ်မှာ UEFA လူငယ်လိဂ် ၂၀၂၁/၂၂ of Oct 20, 2021
အဆိုပါ Datasets ဖို့အသုံးဝင်သောဖြစ်ပါတယ် အွန်လိုင်းလောင်းကစားကိုကူညီပါ သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်လောင်းကြေးကမ်းလှမ်းမှုတွင် - 1x2 Minsk U19 အနိုင်ရ၊ BFC Daugavpils U19 အနိုင်ရ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အရေအတွက် sဒီပွဲမှာဒါမှမဟုတ်ရမှတ်ထဲမှာသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ် အတိအကျရမှတ်.
၏ရည်မှန်းချက် Ņikita Šaraņins
အစားထိုး Maksim Lutskiy